Wararka - SUNTOP saxsanaanta sare ee Mashiinka goynta leysarka yar yar ee jarmalka gudaha Jarmalka
SUNTOP Mashiinka goynta yar ee xajmiga yar yar ee mashiinka jarmalka gudaha Jarmalka
Mashiinkayaga mashiinka goynta leysarka fiber-ka ah ee saxda ah ee saxda ah ayaa si guul leh loogu geeyay Jarmalka. Macaamiilku wuxuu badanaa siiyay adeegyo bir ah oo wuxuu ubaahanyahay sax 0.08mm. Bilowgii, wuxuu doortay alaab-qeybiyeyaal badan, kadib markuu isbarbar dhigay mishiinka qaabeynta, saxsanaanta, xirfad ahaanta iyo adeegga mashiinka, SUNTOP LASER ayaa ugu dambeyn la xushay. Halkan, waxaan u rajeyneynaa ganacsigiisa inuu ka fiicnaado oo ka sii fiicnaado. SUNTOP way sii wadi doontaa inay si adag ushaqeyso oo kaaama deyn doono.
Sida laga soo xigtay xogtii ugu dambeysay ee uu sii daayay Maamulka Guud ee canshuuraha, soo dejinta iyo dhoofinta ganacsiga shisheeye ee Shiinaha ayaa gaaray 2.84 trillion yuan bishii Oktoobar, koror ka yimid 4.6% isla muddadaa sanadkii la soo dhaafay (isla tan hoose). Tani sidoo kale waa kobaca wanaagsan ee soo dejinta iyo dhoofinta ganacsiga ajaanibta shan bilood oo xiriir ah laga soo bilaabo Juun. Kuwaas waxaa ka mid ahaa, dhoofintu waxay ahayd 1.62 tiriliyan yuan, koror 7.6% ah; soo dejinta waxay ahayd 1.22 tiriliyan yuan, koror ah 0.9%; macaashka ganacsiga wuxuu ahaa 401.75 bilyan yuan, koror ah 34.9%. Falanqeyntu waxay muujineysaa in qodobada wanaagsan ee gudaha iyo dibaddaba ay weli sii kordhayaan, ganacsiga shisheeyahana waxaa la filayaa inuu sii wado isbeddel koror joogto ah sanadka oo dhan.
Guud ahaan, 10-kii bilood ee ugu horreeyay sannadkan, wadarta qiimaha Shiinaha ee soo dejinta iyo dhoofinta badeecadaha waxay ahayd 25.95 trillion yuan, koror ah 1.1%. Kuwaas waxaa ka mid ahaa, dhoofintu waxay ahayd 14.33 trillion yuan, koror ah 2.4%; soo dejinta waxay ahayd 11.62 trillion yuan, hoos 0,5%; macaashka ganacsiga wuxuu ahaa 2.71 trillion yuan, koror ah 16.9%.
Iyadoo la ilaalinayo koritaanka joogtada ah ee miisaanka, qaab-dhismeedka ganacsiga Shiinaha ayaa la sii wanaajiyay, iyadoo soo dejinta iyo dhoofinta ganacsiga guud ay kordhaysayna saamiga oo kordhaya. 10-kii bilood ee ugu horreeyay, soo dejinta iyo dhoofinta guud ee Shiinaha waxay gaadhay 15.6 trillion yuan, korodh dhan 2.8%, oo u dhiganta 60.1% wadarta qiimaha ganacsiga dibadda ee Shiinaha, koror 1% ah isla muddadaa oo kale sanadkii la soo dhaafay. Kuwaas waxaa ka mid ah, dhoofintu waxay gaartay 8.51 trillion yuan, koror ah 4.8%; soo dejinta ayaa gaadhay 7.09 trillion yuan, koror 0.5% ah. Isla muddadaas, soo dejinta iyo dhoofinta ganacsiga wax soo saarka ayaa gaadhay 6.09 trillion yuan, hoos ayuu u dhacay 6.2%.
Falanqeyntu waxay muujineysaa in soo kabashada degdegga ah ee dhoofinta ganacsiga guud ay dhiirrigelin siineyso hagaajinta guud ee qaab dhismeedka ganacsiga. Wang Han, oo ah madaxa dhaqaalaha ee Societe Generale Securities, ayaa sheegay in tan iyo bishii Maarso, geeddi-socodka dib u soo kabashada Shiinaha, awoodda soo kabashada inta badan waxay ka timaaddaa dhoofinta ganacsiga guud. Heerka kobaca sanadlaha ah ee dhoofinta ganacsiga guud wuxuu kusoo kabtay 16.8% halka hooseysa - 4.5% bishii Maarso ilaa Oktoobar; laga bilaabo Jannaayo illaa Oktoobar, heerka kobaca guud ee ganacsiga guud wuxuu ku soo kabtay 2.8%, oo ka dhigan qiyaastii 60% dhoofinta Shiinaha, koror ku saabsan 1% marka la barbar dhigo isla muddadaas sanadkii la soo dhaafay. Isla muddadaas, ganacsiga ka-soo-saarka soo-dejinta isugeyntu wuxuu ahaa - 7.5% sannad-sannadeedkii, iyo ganacsiga wax-soo-saarka soo-gala wuxuu ahaa - 14.7% sannad-sannadeedkii. In geeddi-socodka dib-u-soo-kabashada dhoofinta ka dib cudurrada faafa, ganacsiga guud ee qiimaha sarreeya ayaa si fiican u soo kaban doona iyo qaabdhismeedka ganacsiga Shiinaha waa la hagaajin doonaa.
Pipe Fiber Laser magaabay, Tuujiye Laser, Mashiinka Goynta Tube Fiber, Shiinaha Fiber Laser Goynta Machine, Mashiinka Goynta Laser Fiber, Mashiinka Mashiinka Mashiinka Fiber Laser,